यी हुन् भीआईपी , मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको कोठामा बास, एक रातको रेट…! – Bishal4You
यी हुन् भीआईपी , मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको कोठामा बास, एक रातको रेट…!
Bishal4You ११ पुष २०७६, शुक्रबार २२:१९
काठमाडौं । नारी चरित्र दैव न जाने अर्थात स्त्री जातिको चरित्र भगवानालाई पनि थाहा हुँदैन । यसको शि कार नेपालका धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरु भएका छन् । यसमा पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम चर्चामा रहेको छ । उनले आफ्नै एक महिला कर्मचारीमाथि ज ब रज स्ती गरेको आरोपमा पद मात्रै गुमाउनु परेन्, संगै भएको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि समाप्त हुन पुग्यो । उनी अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
यस्तै एक घटना पाकिस्तानबाट पनि बाहिर आएको छ । अहिलेका पाकिस्तानी रेलमन्त्री शेख रशीद र टिकटक स्टार हरीम शाहले रातीको समयमा केही कुराहरु गरेको भिडियो बाहिर आएको छ । उनीहरुले खुलमखुल्ला च्याटमा कुरा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो अहिले पाकिस्तानमा मात्रै नभई विश्वभर भा इरल भइरहेको छ ।
हरीमका अनुसार मन्त्री रशीदले उनीसँग पहिले ना ङ्गो भ एर अ श्ली ल भिडि यो कल पनि गरेका थिए । यो स्पष्ट छैन कि कसरी वा किन भिडियो अनलाइन लीक भयो । भर्खरै, उनको एक भिडियो विदेश मन्त्रालय भित्रबाट आएको थियो । उनलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको कुर्सीमा बसेको देख्न सकिन्थ्यो । त्यो भिडियो एकदमै विवादमा पनि आएको थियो ।
पछि, निजी होटलमा गिलगित बाल्टिस्तानका मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएलएन) का सांसद मोहम्मद अमीनसँग उनको नृत्यको अर्को भिडियो पनि भाइरल भएको थियो । उनलाई पेशे वर ध न्दा गर्ने युव तीका रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरिएको छ । हालै बाहिर आएको एक जानकारी अनुसार उनीसँगै एकजना उनकी साथि पनि छिन् ।
उनीहरु समयसमयमा दुबई लगायतका देशहरुमा गएर शेखहरुलाई आ न्नद दिने काम गर्छन । उनीहरुको रे ट पनि तोकिएको थियो । जानकारी अनुसार हरीमसँग एक रात बिताउनको लागि १० हजार दि राम भनिएको थियो । यद्धपी यी कुराहरु पुष्टि भएका छैनन । News